AUKEY आधिकारिक रूपमा गतिशील डिटेक्टको साथ पाँच लोडर परिचय गर्दछ Androidsis
AUKEY मोबाइल र ल्यापटपको लागि पाँच स्मार्ट चार्जर प्रस्तुत गर्दछ
ईडर फेरेनो | | हाम्रो बारेमा, अन्य उपकरणहरू
AUKEY एक चार्जर वा ब्याट्री को क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो चिनिएको ब्रान्ड हो। कम्पनीसँग चार्जरहरूको विस्तृत श्रृंखला छ, अधिक कार्यकुशल हुन र हाम्रो जीवन अलि सजिलो बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको। उनीहरूले अब हामीलाई स्मार्ट चार्जरहरूको नयाँ दायरामा छोड्छ जुन मोबाइल वा ल्यापटपको साथ प्रयोग गर्नका लागि हो।
कुल पाँच नयाँ चार्जरहरू यस AUKEY दायरामा हाम्रो लागि पर्खिरहेका छन्। त्यसो भए हामी तपाईंलाई यी पाँच मोडेलहरूको बारेमा बताउँछौं। ताकि तपाईं तिनीहरूको बारे सबै कुरा जान्न सक्नुहुनेछ, कि हामी अब आधिकारिक रूपमा किन्न सक्छौं, र तपाईंले खोजिरहनु भएको सबै भन्दा राम्रो मिल्दो एउटा फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
यस दायराका सबै चार्जरहरू गतिशील डिटेक्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नुहोस्। यसको लागि धन्यवाद, यो पत्ता लगाइएको छ जब त्यहाँ एक यन्त्र जडान गरिएको छ वा जब त्यहाँ दुई छन्, जसले गर्दा चार्जरको पावर दुईको बीचमा बाँड्न सकिन्छ, सक्षम चार्जिंगलाई अनुमति दिँदै, तर दुबैलाई चार्ज गर्न प्रत्येक समय अनुमति दिँदै।
1 गतिशील डिटेक्टको साथ AUKEY USB C नेटवर्क चार्जर
2 शक्ति डेलिभरी &.० र गतिशील डिटेक्टको साथ AUKEY USB C चार्जर
3 AUKEY USB C चार्जर 60W
4 GAN को साथ AUKEY USB C चार्जर
5 AUKEY USB C चार्जर 60W
गतिशील डिटेक्टको साथ AUKEY USB C नेटवर्क चार्जर
सबै भन्दा पहिले यो ब्रान्ड पर्खाल चार्जर हाम्रो पर्खाइमा छ, यसले हामीलाई W०W को लोडको अनुमति दिन्छ। त्यसैले यदि तपाईंसँग यो फोन छ कि यो समर्थन छ, यो तपाईं छोटो समयमा यो चार्ज गर्न को लागी अनुमति दिनेछ। यो चार्जर छ पावर डेलिभरी and.० र मानक USB आउटपुटको साथ तपाईंको USB-C र USB उपकरणहरू चार्ज गर्न। थप रूपमा, हामी एकै समयमा दुई पोर्टहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं, यस अवस्थामा पनि अनुमति दिईएको छ कि एक उपकरणमा १ 3.0 डब्लू चार्ज गरिएको छ।
त्यसकारण हामी यस AUKEY चार्जरको साथ द्रुत र दक्ष चार्जको आनन्द लिन सक्दछौं। यो मोबाईल फोनको एक विशाल चयनसँग उपयुक्त छ, जबसम्म तिनीहरूसँग USB-C वा USB छ। अरु के छ त, एक पातलो, हल्का र कम्प्याक्ट चार्जर हो, जुन हामी घरमा प्रयोग गर्न सक्दछौं, तर हामीसँग सँधै छुट्टीमा पनि लैजान्छौं।
यो AUKEY चार्जर हुन सक्छ .१.30,99eको मूल्य मा किन्नुहोस् अमेजनमा, कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
शक्ति डेलिभरी &.० र गतिशील डिटेक्टको साथ AUKEY USB C चार्जर
यो दोस्रो चार्जर हामीले देख्यौं अघिल्लो मोडेल जस्तै छ। दुई USB-C पोर्टको साथ आउँछ, जसले हामीलाई फोनहरू जस्ता सबै प्रकारका उपकरणहरू चार्ज गर्न अनुमति दिनेछ, साथसाथै एन्ड्रोइड मोडेलबाट आईफोन मोडेलसम्म फोनको विशाल दायरासँग उपयुक्त रहनेछ। यस अवस्थामा, चार्जरले हामीलाई W 36W को पावर दिन्छ।
तर पनि हामी एकै समयमा दुई उपकरणहरू चार्ज गर्न सक्छौं, जसले यस अवस्थामा पावर १W डब्लू बनाउनेछ। यो अझै एक उत्तम विकल्प छ धेरै चाँडो उपकरण चार्ज गर्न को लागी। त्यसैले यो एक चार्जर हो कि यस अर्थमा यसको लायक छ। थप रूपमा, यो सानो छ र थोरै तौलको रूपमा, हामी यसलाई सँधै हामीसँगै लिन सक्छौं, काम गर्ने वा यात्रा गर्ने।
अर्को राम्रो विकल्प AUKEY चार्जर दायरामा, जुन हामी गर्न सक्दछौं कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
AUKEY USB C चार्जर 60W
AUKEY बाट यो नयाँ दायरामा तेस्रो चार्जर एक शक्तिशाली छ मानक USB र पावर डेलिभरी output.० आउटपुटको साथ USB चार्जर। तपाईंको USB-C र USB उपकरणहरू कुशलतापूर्वक चार्ज गर्न अभिप्राय गरिएको छ। यसको लागि धन्यबाद, हामी एक W० डब्ल्यू चार्ज प्राप्त गर्न सक्दछौं, जुन यूएसबी-सी पोर्टमा सबै समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यस तरीकाले उपकरणलाई द्रुत रूपमा चार्ज गर्न सकिन्छ। यदि हामी एकै साथ दुई उपकरणहरू प्रयोग गर्न चाहन्छौं भने हामी यसको प्रयोग गर्न सक्दछौं दुबै पोर्टहरू एकै समयमा प्रयोग गर्दा Deli 45W पावर डेलिभरी।
यस दायराका बाँकी चार्जरहरू जस्तै यो एक हो कम्प्याक्ट, हल्का वजन र प्रयोग गर्न धेरै सजीलो मोडेल। त्यसकारण हामी हामीसँग जहिले चाहानुहुन्छ यसलाई लिन सक्दछौं। यसबाहेक, यो चार्जर थपिएको युटिलिटी र पोर्टेबिलिटीका लागि फोल्डिector कनेक्टर छ। घरमा, अफिसमा र कहिँ पनि चार्जको लागि उपयोगी छ।
हामी यसलाई अब अमेजनमा किन्न सक्छौं, कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।, २.२eयुरोको मूल्यमा।
GAN को साथ AUKEY USB C चार्जर
AUKEY को यो दायरा भित्र चौथा चार्जर बाहिरको छ को उपयोग गर्नुहोस् उन्नत GaN टेक्नोलोजी। यसको लागि धन्यबाद, धेरै छिटो चार्ज प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन हामी मोडेलहरू जस्तै फाइदा लिन सक्छौं म्याकबुक प्रो, आईफोन XS, XS अधिकतम, XR, निन्टेन्डो स्विच, वा अन्य USB- C संगत उपकरणहरू जसले USB चार्जिंग समर्थन गर्दछ।
यसको एक फाइदाहरू यो हुन् कि यसले हामीलाई यो साँच्चिकै चार्ज, W० डब्ल्यू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, तर यसको आकार ठूलो नहुँदा। किनकि यसले धेरै कम्प्याक्ट डिजाइन कायम गर्दछ, जसले यसलाई सहज बनाउँदछ। तपाईं यसलाई ल्यापटप स्लीभ वा ब्याकप्याकमा बोक्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, यो एक तरीकाले डिजाइन गरिएको छ जसले उपकरणहरूलाई धेरै अधिक रेखाचित्रबाट बचाउँदछ वा ओभर तापबाट रोक्दछ।
यो मोडेल छ सामान्यतया .२.42,99 युरोको मूल्य हुन्छ। जबकि अस्थायी रूपमा यो अमेजनमा केवल। 34,99 यूरोमा किन्न सकिन्छ, कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
अन्तमा हामी फेला पार्दछौं AUKEY को यस दायरामा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण को मोडल। चार्जरसँग W०W को पावर छ, र साथै दुई USB-C पोर्टहरू पनि छन्। त्यसैले हामी एकै समयमा दुई मिल्दो उपकरणहरू चार्ज गर्न सक्दछौं, तिनीहरू फोन वा ल्यापटप हुन। यो एक शक्तिशाली चार्जर हो जसले तपाईंलाई एकै समयमा दुई उपकरणहरू चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ, र यो एकै समयमा ल्यापटप र मोबाइल फोन पनि हुन सक्दछ।
यसको महान शक्तिको बावजुद, हामी यस दायरा मा हेर्दै छौं कम्प्याक्ट डिजाइन राख्छ ब्रान्ड उत्पादनहरूको। हामी यसलाई हाम्रा साथ यात्रा वा छुट्टीमा धेरै साधारण तरीकाले लैजान सक्छौं। चार्जर पनि यस तरीकाले डिजाईन गरीएको छ कि यसले चार्ज गरिरहेको उपकरणलाई तातो पार्दैन वा धेरै अधिक प्राप्त गर्नबाट रोक्छ।
यो चार्जर १। .59,99 ur को मूल्यमा किन्न सकिन्छ अमेजनमा, कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » अन्य उपकरणहरू » AUKEY मोबाइल र ल्यापटपको लागि पाँच स्मार्ट चार्जर प्रस्तुत गर्दछ
Xiaomi Mi MIX Alpha: लगभग-360०-डिग्री स्क्रिनको साथ एक मोबाइल
Xiaomi Mi9Pro 5G: 5G को साथ सब भन्दा शक्तिशाली हाई-एंड